Akụkọ - Ihe kpatara na ihe ngwọta maka ntụgharị nke usoro ofufe mmebi mmebi
Mgbanwe ntụgharị nke onye na-egbochi corrosion ga-eme ka mgbanwe nke gas butere, nke ga-emetụta arụmọrụ nke onye ofufe. Kedu ihe kpatara ya na otu esi edozi ya? Ebumnuche na azịza maka ntụgharị nke ọnụọgụ mgbochi corrosion:
1. Ihe kpatara uzo di iche iche:
(1) O nwere ike ịbụ na ezigbo uru nke ọkpọkọ ntanetị na-eguzogide dị iche na uru a gbakọrọ. Ọ bụrụ na ezigbo uru nke ọkpọkọ network njirimara coefficient K bụ ihe na-erughị uru agbakọtara, mmụba ahụ ga-abawanye, ma ọ bụrụ na uru K bara uru karịa uru agbakọtara, ọ ga-ebelata.
(2) Mgbe ahọpụta onye ofufe, mmetụta nke ngụkọta nsogbu ndiiche nke mgbochi corrosion ofufe na-adịghị juputara-atụle. Mgbe nrụgide zuru oke bụ ntụgharị dị mma, mmụba ahụ ga-abawanye, na mgbe nrụgide zuru oke bụ ihe na-adịghị mma, mmụba ahụ ga-ebelata.
Nke abuo, ihe ngwọta na ndiiche nke mgbochi corrosion ofufe eruba:
(1) Dochie mgbochi mmebi ahụ na nrụgide dị elu ma ọ bụ obere.
(2) Mee ka mmeghari ahụ dịkwuo elu ma jiri ngwaọrụ ntụgharị iji dozie usoro ahụ, dị ka ịgbanwe valvụ ikuku na ọnụ ụzọ ngbanwe.
(3) Gbanwee impeller ọsọ nke mgbochi corrosion ofufe.
(4) Gbanwee nguzogide nke netwọk ọkpọkọ ma gbanwee usoro ahụ iji mee ka usoro ahụ dịkwuo mkpa maka mkpa ọrụ.
Ihe ndị a dị n'elu bụ ihe kpatara na azịza maka ntụgharị nke usoro ofufe mmebi ahụ. Mgbe nsogbu ahụ mere, ị nwere ike ịlele ihe ndị dị n'elu ma mee ihe kwekọrọ na ya mgbe ịchọtara ihe kpatara ya iji zere ntụgharị ofufe site na-emetụta ọrụ nkịtị nke ọrụ ahụ.
Post oge: Sep-20-2019
Centrifugal duct Fan, Single Inlet Centrifugal Fan, Anu ulo Scrubber, Nnukwu nrụgide Centrifugal Fan, Iyuzucha Fan, Radial Agụba Centrifugal Fan,